Nabdoon Macalin Haaruun oo goor dhoweyd Muqdisho lagu dilay.
Muqdisho, 18-August-2007 @[Buurhakaba Media]
Allaha u naxariistee waxaa goor dhoweyd Magaalada Muqdisho lagu dilay Nabadoonkii Beesha Warsangeli Abgaal Nabadoon Macalin Haaruun Macalin Yuusuf Beerey.
Sida ay inoo xaqiijiyeen Ehelada Marxuumka oo aanu xiriir la sameynay kooxo ku hubeysan Bistoolado ayaa dhowr xabadood la dhacay Nabdoonka, xilli uu ka soo baxayay Masjid ku yaal Deegaanka Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid.
Labo nin oo bistoolado ku hubeysan ayaa toogasho ku dilay Marxuumka salaadii Cishaha kadib, xilli uu ka soo baxay Masjid una dhowaa agagaarka Gurigiisa. Nabdoonkan oo caan ayaa si weyn looga yaqaanay Magaalada Muqdisho iyo Gobolada ku dhow dhow, iyadoona ay baxsadeen kuwii geystay dilka naxdinta leh.
Allaha u naxariistee Nabadoon Macalin Haaruun ayaa ka mid ahaa Ergada ka qeyb galeysa shirka dib u heshiisiinta qaran, isagoona horay u ahaa Gudoomiyaha Guurtida Beelaha Hawiye. Lama oga kooxaha ka dambeeyay Dilkiisa iyo sababta loo dilay waxaase dilalkan ay qeyb ka yihiin dilalka taxanaha ah ee ka dhaca Caasimada Muqdisho.
Alaha u naxariistee Macalin Haaruun ayaa waxa uu ahaa nin nabad doon ah oo si weyn looga yaqaan caasimadda, isagoo ka qeyb qaatay dadaalo badan oo dib u heshiisiin dhinaca qabaa'ilka ah 16 kii sano ee la soo dhaafay. Waa nabadoonkii ugu horreeyay ee lagu dilo caasimadda Soomaaliya lixdii bilood ee la soo dhaafay.